INDLU YAMATYA NEMIBALA ECXHICHEN ITZA - I-Airbnb
INDLU YAMATYA NEMIBALA ECXHICHEN ITZA
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFederico
Indlu entle enesitayile saseMexico, ebekwe ngaphantsi kwekhilomitha ukusuka kwindawo yenzululwazi yezinto zakudala eChichén-Itzá.
Iyingqayizivele ngobuhle bayo kunye nendawo. Ukuhamba unokufikelela kuyo yomibini indawo ye-archaeological, kunye neziko lePisté, apho ufumana iindawo zokutyela, iivenkile, iibhaka, iikhemesti, iigrocers, njl.
Indawo ecwangcisiweyo yokutyelela iindawo ezininzi ze-archaeological, iikholoniyali kunye nobuhle bendalo, obufana ne-cenotes kunye neelwandle.
Kuya kuba luvuyo ukukwamkela.
Indlu iyingqayizivele ngenxa yokusondela kwayo kwindawo ye-archaeological zone kunye nobuhle bayo. Ngaphezulu kwe-1000 yeemitha zesikwere segadi enemithi yeziqhamo: iibhanana, iikhokhonathi, iiavokhado, iimango, ii-anonas, iimameyes, iiplums, njl.
Vuka uye kucula iintaka kwaye ujabulele ubusuku obuhle obuneenkwenkwezi.
Kuqhelekile ukubona zonke iindidi zeentaka, ukususela kwizikhwenene ukusa kwiziqongqothwane, kwanoonomatse bedlala phakathi kwemithi.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.60 · Izimvo eziyi-257
Ikhaya likaFederico lisePisté, eYucatán, eMexico.
I-Pisté yidolophu apho indawo ye-archaeological ye-Chichén Itzá ikhona, isimangaliso sehlabathi, apho ukongeza ukuyonwabela emini, unokonwabela umboniso wangokuhlwa kwi-Kukulkan nights.
Edolophini uya kufumana zonke iintlobo zeendawo zokutyela eziqhelekileyo, ezinokutya okwahlukeneyo kommandla, iindawo zokubhaka, ii-tortillerías, iikhemesti, iivenkile ezithengisa izinto eziluncedo (OXXO), iibhula, iimpahla kunye neevenkile zobugcisa. Kukho ii-ATM ezi-2 kuphela: enye kwi-OXXO kwaye enye kwindawo ye-archaeological zone, ngoko kuyacetyiswa ukuba uphathe imali eyaneleyo. Kukho iindawo ezahlukeneyo apho bamkela iidola kunye neendawo zokutshintshiselana ngemali yelizwe.
Andihlali endlwini, kodwa ndihlala ndifumaneka kuyo nantoni na iindwendwe eziyifunayo, ukuzinceda kuhambo lwazo. UJaime nentsapho yakhe nabo baya kuhlala befumaneka ukuze babancede ukuba bayakufuna. UJaime ujongene nokugcinwa kwendlu kwaye uhamba rhoqo ekuseni ukuze acoce ichibi kwaye akhangele ukuba iindwendwe zifuna okuthile.
Andihlali endlwini, kodwa ndihlala ndifumaneka kuyo nantoni na iindwendwe eziyifunayo, ukuzinceda kuhambo lwazo. UJaime nentsapho yakhe nabo baya kuhlala befumaneka ukuze babancede…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pisté